mardi, 19 avril 2016 12:58
Mahajanga : 4x4 nandona posy, olona iray naratra
Fiara tsy mataho-dalàna iray nentina sinoa no nifatratra tamin'ny posy feno kesika voatabia. Nivarina tany an-kady ilay posy sy ireo entana nentiny. Nipitika niaraka tamin'izay koa ilay mpitondra posy sady naratra. Ny maraina teo, tokony ho tamin’ny 07 ora sy 45 no nitrangan'ny loza, teny aminy lalàna midina ny Pont FITIM amin’ny lalam-pirenena faha-4.
mardi, 19 avril 2016 12:36
Tsararano – Mahajanga : Gadra manafika mpitondra BAJAJ
Tra-tehaky ny Polisy ny roa lahy tamin'ireo enina nanafika mpitondra BAJAJ tao Tsararano ny alin’ny 14 aprily lasa teo. Gadra mbola eo ampamitana ny saziny ao aminy fonjan'i Marofoto ny iray amin’izy ireo, izay mahazendana ny nahatafavoahany tao, ka nanohizany izao asa ratsiny izao indray. Eo am-pikarohana ireo efa-dahy namany ny Polisy. Ireo mpivarotra ao an-tsenan’i Mahabibo hamonjy fodiana ao Tsararano no kinendrin'ireo jiolahy, saingy efa tafidina ny BAJAJ izy ireo ka ny mpamilin’ity fitaovam-pitaterana kodiaran-telo ity no nifatraran'ny rihatra, niharan’ny vono sy fandrobana ny vola tany aminy dia nitsoaka izy ireo avy eo. Miantso ny fiaraha-miasa amin'ireo tsara sitrapo ny mpitandro ny filaminana ahafana misambotra azy efa-dahy tsy mbola tratra.
mardi, 19 avril 2016 11:42
Sary L'express - France
Ekatera: Horohorotany, nitsoaka ny gadra
Vokatry ny horohorotany tany avaratra andrefan'ny Equateur tamin'ny sabotsy teo dia niakatra hatrany amin'ny 413 ireo olona maty, ary 2600 ny naratra. Nahery vaika tokoa izany fihetsehan'ny tany izany satria nihoatra ny 7.8 tamin'ny fandrefesana Richter, ka maro ireo trano sy fotodrafitrasa nirodana. Miaramila mihoatra ny 20 000 no nalefan'ny fanjakana ekatorialy hanampy ny mponina, ary dia nasiana fepetra manokana ny amin'ny fandriampahalemana satria dia betsaka ny manararoatra mangalatra. Nisy 160 ny voafonja no nandositra, satria nirodana ihany koa ny fonja any an-toerana, 30 no efa voasambotra, 20 no niverina taminn'ny nahimpony, 110 kosa no mbola tsy hita popoka.
mardi, 19 avril 2016 11:16
Sary Sobika Befotaka
Befotaka : Nahazo rano fisotro madio ny mponina
Fiaraha-miasan’ny foibem-paritry ny rano sy ny UNICEF no nahazoana ny rano. Mitetim-bidy hatrany amin'ny 140.000.000 Ariary ny sarany fanamboarana ny fotodrafitrasa nisintomana ny rano avy an-tendrombohitra. Ireo vehivavy no afa-pahasahirana satria tao anatin'ny tebiteby teo aloha no mantsaka any amin'ny reniranon'i Tomampy izay misy voay. Tombony ihany koa amin'ny lafiny ara-pahasalamana.
mardi, 19 avril 2016 09:07
Mitaky ny famerenana an'izy ireo amin'ny asany, araky ny efa tapaky ny fitsarana izy 4 mirahalahy, izay nitaky sy nilaza ny tsy mety ao amin'ny Air Madagascar.
lundi, 18 avril 2016 10:38
Sary zanabolana 8h45
Ny lalana voavinavina andalovan'i Fantala: Mety tsy hikasika an'i Madagasikara izy, fa ny rivotra entiny kosa dia mitondra orana sy rivotra, indrindra ho an'ny avaratry ny nosy.
Trano may Ankasina.
Tonga nijery ireo traboina eny Ankasina ny Filoha Hery Rajaonarimampianina taorian'ny solotenan'ny ministeran'ny mponina. Ny Ben'ny Tanàna izany sisa no andrasana satria dia samy mandeha irery avokoa ny tompon'andraikitra mba ho tsara endrika eo imason'ny traboina fa tsy misy hatreto ny fifandrindrana hanampiana sy hitadiavana vaha olana amin'ity hay trano lava toy izao.
dimanche, 17 avril 2016 18:18
Hay trano Ankasina Andrefana
Trano manodidina ny efapolo tafo eo ho eo no may kilan’ny afo io folakandro io teny amin’ny faritra Ankasina andrefana. Fatana ratsy fipetraka no nahatonga ny afo ka niteraka izao hay trano izao, marihina moa fa dia trano hazo no ankabetsahany, tsy nisy ny naratra na aina nafoy, fa araka ny filazan’ireo nanatry maso dia ankizy kely iray no mbola tsy hita hatramin’izao. Maro ny entana simba arak'izany na dia niezaka namonjy ihany aza ireo mpamonjy voina, maro vkatr'izany ireo tsy misy hialofana.
Tandremo sary mahatohina
samedi, 16 avril 2016 21:26
Masiakampy-Miandrivazo : Nitsapa ny herin’ny ody basiny, maty nitifi-tena ilay mpimasy
Tany Masiakampy, 30km miala an’i Miandrivazo no niseho ny loza androany sabotsy. Ombiasy malaza ao an-tanàna, niantehitra tamin’ny odiny fa tsy laitran'ny bala izy hoy ny tenany. Nalainy ny basy, nataony tao am-bava ny vava-basy ary napoakany. Niparitaka ny atidohany.
vendredi, 15 avril 2016 19:14
Manomboka ny eny Iavoloha
Page 453 sur 501